Iphupha lokufaka izinto kwi-Intanethi ➡ ➡️ kwi-Intanethi
Uninzi lwabantu ludibanisa indawo yomlilo kunye nentuthuzelo. Ngokukodwa ebusika, indawo yokubasa umlilo kwigumbi yindawo efudumeleyo apho bathanda ukuxhoma khona kunye nokuhlala kunye. Ukuba iinkuni ziqhekeka ngokuthambileyo kwaye indawo yokubasa umlilo ine-soot encinci kuyo, oku kuhlala kunxulunyaniswa nemvakalelo yokuthuthuzela.
Indawo yomlilo nayo inokudlala indima ekutolikeni kwamaphupha. Kuyenzeka ukuba abantu baphuphe bebona umlilo kwezi, okanye ephupheni iziko lomlilo licinyiwe okanye litshaya kakhulu. Athetha ntoni la maphupha?
1 Uphawu lwephupha «itshimini» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «itshimini» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «indawo yomlilo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «itshimini» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo ngokubanzi, uphawu lwephupha luhlala luphawu oluqinisekileyo. Imele ngokusisiseko Ku lungileXa nihlala kunye ekhaya, kunqabile ukuba kubekhona imilo okanye umsindo kungekudala. Wonke umntu uyavana. Kodwa nakwiimeko zorhwebo, izithembiso zomlilo ephupheni. impumelelo.
Umntu ekuthethwa ngaye unexesha elihle phambi kwakhe kwaye uya kuba nakho ukuhlala engenaxhala. Olu toliko lusebenza ngakumbi ukuba ephupheni kuvutha umlilo oqaqambileyo noshushu kwindawo yomlilo. Umsi wokukhanya unokumela amaxesha aphumeleleyo. Ngokunokwenzeka kukho izinto ezinobunzima kunye noxinzelelo ebomini bephupha lokugqibela. Oku kuncinci ngoku kwaye unokufumana amandla amatsha kwaye ujonge ethembeni kwikamva.
Kwelinye icala, amaphupha apho kungabikho mlilo kwindawo yomlilo atolikwa kancinci. Ngokoluvo ngokubanzi, oku kufuna ukuba amaphupha angahambi ngokungakhathali kubomi bemihla ngemihla. Kusekho ezinye izinto ezibalulekileyo ukujongana nayo akusavumeli ukulibaziseka. Ngaphandle koko, akuyi kubakho mvisiswano kunye nokulinganisela ekhaya.
Ukongeza, lo mntu kuthethwa ngaye woyikiswa ngendawo yokubasa umlilo ngaphandle komlilo. ukungenisa o ilahleko. Kuya kufuneka uzilungiselele ngaphakathi ukuphulukana nomsebenzi okanye umntu osondeleyo kuwe. Kuyafana nomsi omnyama obonwe ephupheni kwindawo yomlilo. Ukuba, ephupheni, amalahle eziko afudunyezwa kwakhona ngoncedo lweentsimbi, umntu kufuneka alumkele ukungakhathali okugqithisileyo ebomini bokuvuka.
Ukuba uhleli phambi komlilo oshushu kwindawo yomlilo esekini ngelixa uleleyo, ukuthozama kancinci kunokuba yinto efanelekileyo el mundo yomlindo.
Uphawu lwephupha «itshimini» - ukutolikwa kwengqondo
I-psychoanalyst Sigmund Freud ibona ngaphakathi kwendawo yomlilo ephupheni isimboli yabasetyhini. Ukuba indawo yomlilo iyatshaya kwaye iyatshaya, umntu ekuthethwa ngaye unokuba neemfuno zesini kunye nezesondo ezingonelisekanga kubomi bemihla ngemihla. Unqwenela ukusondela ngakumbi emzimbeni kwaye, ngamanye amaxesha, uziva ulilolo. Kukwasebenza kwanjalo kuyo ukuba ukutsalwa kwetshimini akusebenzi ephupheni.
Ngokuka-Freud, isimboli yephupha inentsingiselo echaseneyo xa kusitsha umlilo kwindawo yomlilo ephuphayo. Kule meko, umntu ekuthethwa ngaye unokuphila ngokuthanda kwakhe kwaye onwabele uthando lomzimba ngaphandle kokukhathazeka. Ngenxa yobuntu bakhe obuqhubekayo, akukho bunzima okanye iingxaki kubomi bakhe bemihla ngemihla, nokuba kungasese okanye kungasebenzi.
Uphawu lwephupha «indawo yomlilo» - ukutolika kokomoya
Kananjalo ngokwendlela, uphawu lwephupha lunokuthembisa kokubini okuhle nokubi, kuxhomekeke ekubeni kukho umlilo na endaweni yomlilo okanye hayi. Kwimeko enye, oku kuthetha ngokubanzi ulonwabo lwasekhaya okanye isiqalo esitsha apho omnye eyeka khona Ukuphoxeka kunye neengxaki ezinxulumene nokukhula komntu ngokomoya.